शुक्रबार, पुस ११, २०७६ गोदावरी न्युज
अत्तरिया -सुदूरपश्चिक प्रदेश सभाको हिउँदे अधिबेसन ३ महिना बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन । त्यस्तै गोदावरी राजधानी तोकेको १५ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यि बिभिन्न काममा भईरहेको ढिलाईप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिबेसनमा भईरहेको ढिलाई, राजधानी क्षेत्र कार्यान्वय र प्रदेश सरकारका कामका बारेमा गोदावरी न्युजको लागी शारदा फुलाराले नेकपा सुदुरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामांङ सँग गरेको कुराकानी ।
बर्षे अधिबेसन सकिएको ३ महिना बितिसक्दा पनि अहिले सम्म हिउँदे अधिबेसन सुरु हुन नसक्नुको कारण के हो ?
हिउँदे अधिबेसन र बर्षे अधिबेसनको बिचको समय ६ महिना भन्दा बढी हुनु हुँदैन । सम्बैधानीक हिसावले हामीसंग अझै पनि समय छ । हामीले बर्षे अधिबेशन भाद्र १ गते सम्पन्न गरेका हौ । त्यो हिसाबले अझै समय छ । तर अलि छिटो चलाउन पाए राम्रो हुन्छ । यो हिउँदे अधिबेसनलाई बिधेयकको अधिबेशन पनि भनेर चिनिने भएको हुनाले हामीले आवश्यक पर्ने जति बिधेयक बनाउन सक्छै त्यो अलि ढिलाई भएको छ ।
अब अधिबेशन कहिले सम्म सुरु हुन्छ ?
यो महिना भित्रै हामी हिउँदे अधिबेशन सुरु गर्छै । अहिले सरकार बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागेको देखिन्छ । मैले सुने अनुसार सरकारले कानुनहरु ड्राफ्ट गर्ने काम गरिरहेको छ । केहि दिन भित्रै ड्राफ्ट गरेका कानुनहरु प्रदेश सभामा ल्याएर छिटो भन्दा छिटो प्रदेश सभालाई सञ्चालन गर्नमा प्रदेश सरकार अगाडी बढेको छ भन्ने सुनिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी राख्ने र प्रदेशको नामाकरण गरियो । तपाई स्वयम नै प्रदेश राजधानी सिफारीस समितिका संयोजक हुनुहुन्थो तर प्रदेश राजधानी तोकिएको क्षेत्र गोदावरी कार्यान्वयनमा किन आउन सकेन ?
प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिसकेपछि सरकारले यसलाई द्रुत गतिमा राजधानी बनाउँने काममा लाग्नु पथ्र्यो । त्यो लाग्न अलि ढिलाई भएको छ । खासगरी सुदूपश्चिमको राजधानी गोदावरी र नाम सुदूपश्चिम राखिसकेको पनि आज एक बर्ष भन्दा बढी भईसक्यो । यो बिचमा हामीले यसलाई चाहिले आवश्यक कानुनी कुराहरु र आवश्यक पुर्वाधारहरुको लागि लाग्नुपथ्र्यो त्यो ढिला भएको छ । मैले यो सम्बन्धमा बुझ्दा सरकारले अहिले यसको समिति गठन गरेर यसलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सरकार लागेको छ ।
मैले यहाँका युवाहरु उत्साहित भएर राजधानी तोकेको क्षेत्रमा बोर्ड राखिएको छ भन्ने सुनेको छु । यस कार्यका लागि ति युवाहरुलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु । हामी चाहि अलि ढिला भएका छै । यसको भोगाधिकार लिने र यसको सिमाङ्कन गर्न काम गोगलको ट्रेसबाट गरिएको बुझेको छु । त्यसलाई छिटो गर्न पाएको भए हुन्थो । मेरो कुरा मानेको भए अथवा सरकारले चाहेको भए अहिले हामी त्यहि गोदावरीमा भएको अस्थाई संरचनाहरुलाई प्रयोग गरेर राख्न पनि सकिन्थ्यो । त्यो काममा हामी चुकेका छौ ।
अहिले राजधानी बनाउने समितिको कर्मचारी पनि तोकिएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । जतिसक्यो त्यति चाडो यसको सम्पर्क कार्यालय राखेर काम अगाडी बढाउनु पर्छ । छिटो भन्दा छिटो यहाँका जनताको जनचाहना बमोजिम भएको ठाउँमा राजधानी सार्न यो सरकार छिटोभन्दा छिटो लाग्नु पर्छ । यसको लागि हामी सरकारलाई दवाव दिने काम गरिरहेका छौ ।
जंगल भएको ठाउँमै किन राजधानी तोक्नुभयो ?
त्यो भन्दा सजिलो छ । हाम्रो सुदूरपश्चिममा त्यस्तो खालि ठाउँ देखिएको छैन । त्यसकारणले भरसक राजधानी बनाउँदा धेरै आर्थिक भार पर्ने गरी अर्थात जग्गा किन्ने गरी नबनाउने गरी बनाउने भनेर हामीले आम सहमती गरेका थियौ । जुन क्षेत्रमा अहिले हामीले राजधानी तोकेका छौ । यो क्षेत्र अन्य ठाउँभन्दा उपयुक्त भएको सरोकारवालाहरुले त्यसैमा सिफारिस गरेको त्यो क्षेत्र खासै जंगली क्षेत्र नभएर बुट्यान क्षेत्र भएकाले तोकिएको हो । अहिले कुनै बस्तीलाई हटाएर राजधानी बनाउने योजना थिएर त्यसैले त्यो नयाँ ठाउँमा वातावरणलाई ख्यालमा राखेर, त्यहाको हरियालीलाई कम भन्दा कम क्षती हुने गरेर हामी काम सम्पन्न गर्ने छौ । हामीले संरचना र सडक बनाउँदा जती बुट्यान रुख काटिन्छ त्यो भन्दा बढी रोपेर भएपनि हामी हरियालीलाई जोगाउने छौ । त्यसकारण यो अनुपयुक्त होईन उपयुक्त हो । सात जिल्लाको कैलाली कन्चनपुर र माथिका ७ जिल्लाको मेन जक्सन यो बाटो नै हो । कैलाली कन्चनपुरको पनि बिचमा सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त भएकाले नै यस क्षेत्रलाई राजधानी तोकेका हौ ।
तपाईहरुकै पार्टीको प्रदेश सरकार छ तर आम नागरिक प्रदेश सरकार संग सन्तुष्ट देखिएका छैनन् किन होला ?
प्रदेश सरकारको काम प्रति जनता सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्दा पनि जति काम भएको छ त्यो कामलाई जनताको माझमा लग्न सकिएको छैन् । त्यसकारणले जनताले आफूले चुनेको सरकार आफूले चुनेको जनप्रतिनिधि जति काम गर्नु पर्ने हो त्यति काम भएको छैन भनेर गुनासो बढी सुन्ने गरेको छु । तर प्रदेशका ५३ जना जनप्रतिनिधि जसरी एकिकृत रुपमा अगाडी बढ्नु पथ्र्यो त्यसमा भने हामी चुकेका छौ । भएका कामको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र संगको समन्वयको अलि अभावले पनि यो समस्या आएको छ ।
अहिले संघियता प्रति पनि असन्तुष्टि बढीरहेको छ यो किन प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेरै हो ?
संघियता ल्याउन सबै जनताको उतिकै भुमिका छ । हामीले व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौ तर हामीले आफ््नो व्यवहार परिवर्तन नगरेका हुनाले यस्तो देखिएको हो । यसको मतलव काम गर्ने शैलीमा अलि भिन्नता आएको लाई नै संघियता असफलता तिर गएको भनेर हामीले भन्न मिल्दैन । संघियता आएको २÷३ बर्ष मात्रै भएको छ । भारत जस्तो देशमा पनि भारतको दक्षिण क्षेत्रका मानीसहरुले १० बर्ष सम्म पनि स्विकारेका थिएनन् । प्रदेशहरुमा चुनाव नै भएको थिएन । त्यसको दाजोमा हामी धेरै अगाडी बढिसकेका छौ । अब यसलाई कसरी व्यवस्थीत गर्न सकिन्छ भनेर सोचियो भने यो जतिको राम्रो अरु नहुन सक्छ ।
सत्ताधारी पार्टी र प्रदेश सरकारको बिचमा समन्वयको अभाब हो ?
सरकार त पार्टीबाट नै बन्ने हो तर सुदुरपश्चिम प्रदेशमा जती पार्टी र सरकार बिच समन्वय हुनुपर्ने हो त्यती हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ११, २०७६, १७:१८:००